"Fa ny adala nandray ny fanalany, nefa tsy nitondra solika fitaiza ; ary ny hendry kosa nitondra solika tao anatin’ny fitondrany sy ny fanalany."Mat. 25 : 3,4
Maro ireo olona mandray ny fahamarinana mora foana, kanefa tsy vitan'izy ireo ny mampihatra ny fahamarinana, ary tsy mitoetra ao aminy ny hery miasa mangina avy amin'izany. Mitovy amin'ireo virijiny adala izy ireo, izay tsy nanana solika fitaiza tao amin'ny fitoeran-jirony. Entina hanoharana ny Fanahy Masina ny solika, izay tonga ao amin'ny fanahy amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesôsy Kristy. Ireo olona izay mikatsaka fatratra ny Soratra Masina amin'ny vavaka mafana, ary miantehitra amin'Andriamanitra amin'ny finoana mafy orina, mankato ny didiny, dia ho isan'ireo holazaina fa virijiny hendry. Tsy resaka eny na tsia fotsiny ny fampianarana ny mikasika ny Tenin'Andriamanitra, fa mikasika ny hoe " Eny ary Amena."
Saro-takarina ny zavatra takin'ny filazantsara. lzao no voalazan'ny Apôstôly : "Ary na inona na inona ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaora an'Andriamanitra Ray amin'ny alalany" -Kô1. 3:17 . "Koa amin'izany, na mihinana na misotro hianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany" - 1 Kôr. 10:31. Tsy ho tratra ny fampiharana ny fitiavam-bavaka raha toa ka avela any ivelan'ny lapan'ny fo ny fahamarinana lehibe ao amin'ny Baiboly. Tsy maintsy entina eo amin'ny raharaha mahakasika ny fiainana, na lehibe izany na kely, ny fivavahana voarakitra ao amin'ny Baiboly. Io no tsy maintsy atao ho antony manosika sy fitsipika mifehy ny toetran'ny Kristianina sy ny zavatra ataony.
Tsy zavatra atao ety ivelany ilay solika, izay tena nilain'ireo olona aseho amin'ny alalan'ireo virijiny adala. MiIa mitondra ny fahamarinana ao anatin'ny fitoerana masin'ny fanahy izy ireo, mba hahafahan' izany manadio sy manavao ary manamasina. Tsy fahalalana ara-tsaina no ilain'izy ireo; fa ny fampianarana masina avy ao arnin'ny Baiboly, izay tsy foto-pampianarana tsy azo antoka, tsy mifandray tsara akory, fa fahamarinana velona, mahakasika ireo tombontsoa mandrakizay, izay mifototra eo amin'i Kristy. Ao Aminy no misy ny rafitra feno mikasika ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny famonjena ny fanahy, amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy, no fototra sy andry iankinan'ny fahamarinana.
Ireo olona manana finoana marina an'i Kristy dia maneho izany amin'ny alalan'ny toetra feno fahamasinana, amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Tsapan'izy ireo fa ny fahamarinana, izay ao amin'i Jesôsy, dia mahatratra hatrany andanitra, ary manodidina ny mandrakizay. Fantatr'izy ireo fa ny toetran' ny Kristianina dia tokony haneho ny toetran'i Kristy, ary ho feno fahasoavana sy fahamarinana. Omena azy ireo ny soliky ny fahasoavana, izay mitahiry ilay fahazavana tsy mety lefy mandrakizay. Ny Fanahy Masina ao am-pon'ireo mpino no mahatonga azy ho feno ao amin'i Kristy. - RH, 17 Sep. 1985.